Akhriso natiijada Doorashada Aqalka Hoose ee lagu qabtay Muqdisho | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Akhriso natiijada Doorashada Aqalka Hoose ee lagu qabtay Muqdisho
Akhriso natiijada Doorashada Aqalka Hoose ee lagu qabtay Muqdisho
Doorashada Aqalka Hooose ee xubnaha matala Soomaaliland ayaa maanta mar kale ka dhacday magaalada Muqdisho, ayadoo ammaanka aad loo adkeeyay.
Kursiga Koowaad waxaana ku tartamaayay Musharaxiinta kala ah Ibraahim Suleymaan Xaaji Nuur, Waxa uuna Wareega Koowaad uu helay 9 cod, Musharaxa labaad Cali Cusmaan Cali, waxa uu isna helay 16 Cod halka Musharaxa Saddexaadna uu helay 21 Cod.
Doorashadan ayaa waxaa ay ahayd mid aad u adag, taasi oo la isla gaaray wareeggii labaad ee doorashada.
wareegga labaad waxaa ku guuleystay inuu ka mid noqdo Xildhibaanada Aqalka Hoose Ismaaciil C/raxmaan Sheekh Bashii, oo helay 33 Cod
Faadumo Ismaaciil Xuseen, Qadro Maxamed Tukaale iyo Suuri Diiriye Carab ayaa kusoo kala baxay doorashada kuraasta labaad Seddexaad iyo waliba Afaraad.
Kursiga Shanaad ee Maanta lagu doortay Muqdisho Waxa uu ka mid ahaa Kuraastii ugu adkeyd Waxaana ku tartamay Wasiir Ku Xigeenkii Wasaarada Waxbarashada Soomaaliya Xaamud Cali Xasan, iyo Cismaan Cilmi Boqore, oo ka mid ahaa sanadihii ugu dambeeyay Baarlamaanadii Dalka soo maray.
Cismaan Cilmi Boqore, ayaa ku guuleystay inuu mar kale ka mid noqdo Baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan Aqalka Hooose, waxaana uu helay 25 Cod halka Xaamud Cali Xasan, uu isna helay 22 Cod, Waxaana codeysay Ergo gaareysa 48 Cod hal ka mid ah codadkaasina wuu halaabay.
Previous articleBooliska Canada oo gacanta ku dhigay qof loo haysto dilka 2 gabdhood oo walaalo ahaa
Next articleDaawo Farmaajo oo lagu soo dhoweeyay Muqdisho